‘नेकपामा गुट झाँगियो’ « रिपोर्टर्स नेपाल
‘नेकपामा गुट झाँगियो’
प्रकाशित मिति : ३० मंसिर २०७६, सोमबार
काठमाडौं, ३० मंसिर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता भीम रावल पार्टीभित्रका प्रतिपक्षको परिचय बनाउन सफल छन् । उनले नेकपाभित्र गुट उपगुटको राजनीति भइरहेको भन्दै कडा आलोचना गर्दै आएका छन् । विदेश मामलामा पनि कडा नीति लिदै आएका रावलसँग ऋषि धमलाले गरेको विशेष कुराकानीः
नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको प्रतिवेदनमा के छ ?
उहाँहरुको प्रतिवेदनले वर्तमान समसायिमक विषयको संक्षिप्त विश्लेषण गरेको छ । एक वर्षसम्म बैठक बस्न नसकेकोमा आत्मालोचना गरेको छ, साथै आगामी दिनामा त्यस्तो हुन नदिने कुरा गरेको छ । पार्टीलाई विधि, पद्धतिमा तलदेखि माथिसम्म सुव्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउने विषय उल्लेख गरिएको छ । त्यसगरी कतिपय पार्टीभित्र भएका गलत प्रवृत्तिलाई पनि औल्याइएको छ ।
अध्यक्षद्वयले त पार्टीभित्र गुट झागिँदै गएकाले सरकारले भनेजस्तो काम गर्न सकेन भन्नुभयो नि ?
पार्टीभित्र गुट झाँगिएकाले सरकारले काम गर्न नसकेको भन्ने भाषा त छैन ।
धेरै कमीकमजोरी भएको छ भनियो नि ?
कमीकमजोरी त छन् । भएका कमीकमजोरीलाई औल्याएर आगामी दिनमा त्यस्तो हुन नदिने प्रतिवद्धता आउनु त राम्रो कुरा हो नि ।
सरकारले भनेजस्तो काम गर्न सकेन भनिएको छ, प्रतिवेदन होइन ?
सरकारका कतिपय कमीकमजोरी पनि औल्याइएको छ, साथै सघन पक्ष पनि औल्याइएको छ । कतै अहिले हाम्रो देशको सीमा अतिक्रमण भएको कुरालाई पनि औल्याइएको छ । यी सबै विषयमा आज हुने बैठकमा छलफल हुन्छ र पार्टीले त्यसको निष्कर्ष निकाल्छ । त्यो औल्याएपछि मात्रै पार्टीभित्र भएका गुटगत अव्यवस्था न्यून हुन सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा गर्दा प्रतिवेदनमा के के छ ?
मूलभूत रुपमा नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको पक्षपोषण त्यहाँ गरिएको छ । साथै हामीले ठूला देशहरुको शक्ति र प्रतिस्पर्धाबाट अलग रहनुपर्छ भन्ने भाव पनि त्यहाँ छ । तपाईंले उल्लेख गर्नुभएको कालापानी मात्रै होइन, लिम्पियाधुरादेखि हाम्रा देशका जति पनि जमीनहरु अतिक्रमणमा परेका छन् । त्यसको लागि छुट्टै बैठक बसेर नीति नै तय गरेको छ । सीमा सुरक्षासम्बन्धी छुट्टै कार्यसुचि त्यसमा विस्तृत छलफल हुने छ ।
कार्यसुचिमा के के छन् ?
त्यसका लागि पाँचवटा कार्यसुचि तय गरिएका छन्, जुन सार्वजनिक भइसकेको छ । पहिलो राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान संसोधन पनि सँगै छ । दोस्रो नेपाल–भारत सीमा समस्यासम्बन्धी छ । हाम्रो पार्टीलाई सशक्त ढंगले अगाडि बढाउने आगामी कार्यसुचि पनि छ । त्यसपछि विविधमा विभिन्न समसायिमक कुरालाई समेट्ने कुरा गरिएको छ ।
सीमाको विषयामा भारतसँग सम्वाद गर्न नसकेर कुटनीतिक लेभलमा तपाईंहरु कमजोर हुनुभयो नि ?
भारतसँग संवाद सरकारले गर्ने हो । त्यसको बारेमा के भइरहेको तपार्इंं थाहा भएन ।
देशमा अहिले तपाईंहरुकै दुई तिहाईको सरकार छ नि ?
तपार्इंंले भनेको ठीक हो । त्यसको बारेमा मैले त वारम्बार ध्यानाकर्ष गराएकै छु । अहिले त प्रधानमन्त्री पनि अस्वस्थ हुनुहुन्छ । भारतसँग जुन प्रकारले कुटनीतिक तहमा वार्ता हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नसक्नुमा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यका कारणले हुन सक्छ । पार्टीभित्र पनि हामीले आपूmले गर्नुपर्ने काम तत्काल गर्नुपर्छ भनेर कुरा उठाएका छौं ।
सीमा समस्या कसरी सुल्झाउने नेपाली जनतालाई बताउनुस् ?
त्यो कुरा मैले तपाईंले भन्नुभन्दा पहिला नै भनिसकेको छु । किन भने नेपाली जनताले यत्रो मत दिएर नेकपालाई इतिहासमै माथि पुर्याएको छ । नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौसत्तालाई सुदृढ गरेर नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न मैंले पहिलादेखि नै जोड दिएर आएको छु ।
काम त गर्ने तर एक्सन ओरेन्टेड व्यक्तिहरु खोइ आएको ?
कुन व्यक्तिलाई कहाँ राखेर काम गर्ने भन्ने कुरा पार्टी छलफल तोक्ने हो । त्यो सरकारको बागडोर सम्हाल्ने र त्यसको निर्णयकर्ता व्यक्तिहरुले सोच्ने कुरा हो । जे भएपनि नेकपाले यत्रो ठूलो बहुमत प्राप्त गरेर जुन वसर प्राप्त गरेको छ । यो अवसरमा उसले आफ्ना विगतका प्रतिवद्धता अनुरुप काम गर्नुपर्छ । त्यो भाव अहिलेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अलिकति प्रकट भएको छ । यी प्रतिवद्धताहरुलाई लागु गरियो भने आउने दिनमा मुलुकलाई समृद्ध तुल्याइएला भन्ने मलाई लाग्छ ।
अब तपाईंहरु चीनमुखी हुने कि भारतमुखी ?
हामी अमेरिका, चीन, भारत कुनै पनि मुखी हुँदैनौं । नितान्त नेपाल मुखी हुन्छौं । यदि कोही कतै अरु मुखी भएको छ भने त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेर म बारम्बार भनिरहेको छु । अब तपाईंले चीनको बीआरआईका कुरा गर्नुभएको हो भने बेग्लै कुरा हो ।
बीआरआईलाई त स्वागत गर्नुभएको छ नि ?
आर्थिक विकासका लागि गरिने पारम्परिक सहयोगमा जसको पनि स्वागत गर्दछौं । नेपालको संविधानले कुनै शक्ति गठबन्धनमा संलग्न हुने अनुमति दिँदैन । हाम्रो पार्टीको विधान, सिद्धान्तले पनि त्यो अनुमति दिँदैन । हाम्रो देशको भूराजनीतिक दृष्टिकोणले पनि हामी ती दिशातिर जानुहुँदैन भन्ने हो । राजनीतिक प्रतिवेदनलाई हेरेर तपाईंले त्यस्ता गठबन्धनले के प्रभाव पर्ला भनेर उठाएका मात्रै छौं ।
हिजोको बैठकमा तपार्इंले के भन्नुभयो ?
त्यसमा मैले प्रष्ट भनेँ, ‘यो एक वर्षसम्म बैठक नहुनुको कारण के ? त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? बैठकै नबस्ने गरी के के अप्ठ्यारो भयो’ भनेर मैले प्रश्न उठाएको थिएँ । तर पार्टी अध्यक्ष यो कुरा राजनीतिक प्रतिवेदनमै प्रस्तुत भएकाले त्यहाँ छलफल हुन्छ भन्नुभयो । नेतृत्वले नै यसमा गल्ती भयो भनेर आत्मालोचना भएपछि मैले पनि सकारात्मक ठानेँ ।
सरकार प्रभावकारी भएन भनेर प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि छैन ?
सरकारका कतिपय कामहरु सकारात्मक छन्, कतिपय छैनन् भनिएको छ । देश र राष्ट्रको हितमा गरिएका कामलाई हामीहरु सधैं सकारात्मक रुपमा लिन्छौं । त्यो विपरित भएका कामहरुको आलोचना अवश्य हुन्छ ।
नकारात्मक कुरा के के छन् त ?
विगतका घोषणापत्रहरुमा जुन कुरा लेखिएका थिए, सो अनुरुप हुन नसेको कुरा औल्याइएको छ । यद्यपि विस्तृत रुपमा त्यहाँ ती कुराहरु उल्लेख गरिएका छैनन् ।
पुस ४ गतेबाट संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन्छ, सभामुख को हुन्छ ?
सभामुख को हुन्छ भन्ने बारेमा हिजो छलफलमा पनि आएन र अब हुने छलफलमा पनि को हुन्छ, म भन्न सक्दिँन । यो भन्दा अगाडि पनि केही नेताहरुबीच सचिवालयमा मात्रै छलफल हुँदै आयो, हामीले त्यसको पनि टिप्पणी गरेका छौं । अब सभामुख को हुन्छ ? कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पार्टीका जिम्मेवार नेतृत्वले अगाडि ल्याउनुभएको छैन । सभामुख चयन गर्न अब ढिला गर्नुहुँदैन । उपयुक्त व्यक्तिलाई सभामुख चयन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
सभामखु सुभाव चन्द्र नेम्वाङ कि अग्नि सापकोटा हुनुहुन्छ ?
को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैंले तपार्इंसँग भन्ने कुरा भएन । त्यो पदको लागि को उपयुक्त हुनुहुन्छ भनेर निश्पक्ष ढंगले छानविन भयो भने तपार्इंंले नाम लिएका व्यक्ति मात्रै सभामुख हुन योग्य छन् भन्ने विषय होइन ।
तपाईंहरुकोमा पनि जसले प्रभुत्व जमाउँछ उही नेता बन्छ नि ?
पार्टीको धाराण र राष्ट्र हितमा नसोचर गुटगत हिसावले अगाडि बढ्ने हो भने पार्टी कहिल्यै बलियो हुँदैन ।
हरेक ठाउँमा अध्यक्षद्वयका व्यक्तिहरु मात्रै छन् नि ?
सबैमा नभनौं, कतिपय व्यक्तिहरु त्यस्ता गुटगत रुपमा अवश्य गएका छन् । त्यसैले अहिले राजनीतिक प्रतिवेदनमा गुट झाँगियो भनेर स्वयंम अध्यक्षहरुले नै भन्नुभएको छ ।- File Photo
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर
सिन्धपाल्चोकको लामा टोल पहिरोले पुरियो, सात परिवार सम्पर्कविहीन
काठमाडौं, साउन ३०। शुक्रबार बिहान गएको पहिरोले सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर २ लिदिको लामा
विश्वभर दुई करोड १० लाख बढी कोरोना संक्रमित, नेपालमा आज २५ हजार नाघ्दै
काठमाडौं, साउन ३० । विश्वभर कोरोना सक्रमितको संख्या दुई करोड १० लाख नाघेको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा थप २१ जनालाई कोरोना संक्रमण, तनहुँको एकै वडाका २० जना
काठमाडौं ३० साउन । गण्डकी प्रदेशका थप २१ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। योसहित
सभामुख सापकोटा पहिरो गएको क्षेत्रमा निरीक्षणमा (फोटोफिचर)
सिन्धुपाल्चोक, ३० साउन । प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पहिरो गएर २२ वटा घर पुरिएको सिन्धुपाल्चोकको